Ankatso : nitohy ny korontana, nandamina ny minisitera sy ny Croua | NewsMada
Ankatso : nitohy ny korontana, nandamina ny minisitera sy ny Croua
Nanohy ny hetsika fanoherana ny fanorenana tsy ara-dalàna ao amin’ny faritry ny oniversite ny mpianatra. Niitatra tamin’ny resaka jiro sy rano izany…
Nitohy ny asabotsy maraina teo ny korontana teny amin’ny toeram-ponenan’ny mpianatra eny Ankatso. Nametraka barazy teo amin’ny sampanana Ambohipo mankany Ambolokandrina iny ny mpianatra. Tonga teny an-toerana ny Emmo/Reg nandrava avy hatrany azy ireo raha vao nanombola nisakan-dalana sy nitabataba. Niverina tany amin’ny faritry ny fonenan’ny mpianatra ireo tanora marobe taorian’izay. Nisavorovoro teo ny roa tonta mandrapahatongan’ny tompon’andraikitry ny oniversite sy ny minisiteran’ny fampianarana ambony nandamina ny raharaha.
Noresena lahatra ireto mpianatra mba hilamina manoloana ny olan’izy ireo. Ireo mpianatra izay tsy manaiky ny fanorenana trano tsy ara-dalana ao amin’ny faritry ny oniversite. Niitatra tamin’ny fahatapahan-drano sy jiro eny an-toerana izany. Nilaza ny tale kabinetran’ny minisitra, Rabesaiky Guillaume fa efa mandray andraikitra ny minisitera amin’ny famahana io olana io. “Any amin’ny fitsarana ny raharaha ary hohafainganina ny fahazoana ny didy momba io. Tamin’ny andron’ny tetezamita no nahazoan’ilay olona ny taratasy nahazoana io tany io. Hofantarina hatramin’ny farany ity hosoka ity”, hoy izy. Izany hoe, nisy ny hosoka tamin’ity raharaha ity, nanamafy ny minisitera. Mety tsy amin’ity tany ity ihany izany raha fongarina ny resaka.
Nanamafy koa ny talen’ny Croua, Randriamiarinarivo Abel fa tsy amin’ny korontana no amahana ny olana. “Tsy maintsy esorina ireo mpanorina trano tsy ara-dalàna ato amin’ny faritry ny oniversite”, hoy izy.
Nilamina ihany ireo mpianatra nanoloana izany, kanefa nilaza fa hanohy ny hetsika rehefa ela loatra ny famahana ny olana avy amin’ny tompon’andraikitra.